Blockchain News 27 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 27, 2018 Admin
Blockchain News 27 Janoary 2018
$524M Nem nangalarina amin'ny Hack Japoney fifanakalozana Coincheck
Zavatra cryptocurrency fifanakalozana Coincheck nanamafy fa $524 tapitrisa nomerika danja ny vola efa nangalatra-azo inoana fa manao azy io ny lehibe indrindra amin'ny Hack tokana ny fifanakalozana, outweighing mihitsy aza ny Mt. Gox tapaka ny 2014.
Izany araka ny gazety Asahi Shimbun Japoney, izay mitatitra fa Coincheck nilaza fa ny sasany 500 tapitrisa cryptocurrency vondrona iray fantatra amin'ny anarana hoe Nem, mendrika about 58 lavitrisa Yen, efa nalaina avy mpanjifa 'mpanjifany.
Ny tsatòka dia izao lavo ny momba ny $430 tapitrisa, spooked mpampiasa vola amin'ny fivarotana intsony ny Holdings taorian'ny filazana ny Hack Zoma aloha.
Coincheck dia mbola miezaka ny tatitra mba hamaritana ny toetry ny fanafihana, saingy nanamarika fa tsy cryptocurrencies hafa fiantraikany. Misy mpanao tsikera manondro ny Coincheck ny tsy fahampian'ny multi-sig mpanjifany, izay fanalahidy maro no ilaina mba alalana ny raharaham-barotra, izay tafiditra ao ny fahalementsika izay nanamora ny Hack.
Orinasa kanadiana angovo dia hampiasa entona voajanahary ho ahy cryptocurrency
Amin'ny vidin'ny entona voajanahary tokony hitoetra ambany, Alberta iray mpamokatra efa tonga amin'ny tantara iray mba hampitombo ny fomba Fehiny: mampiasa ny entona renirano amin'ny fitondrana solosaina lohamilina izay mety be karama aho ho toy ny Bitcoin cryptocurrencies.
Iron Bridge Resources Ltd. nanambara izany dia mamorona vaovao antsoina hoe Iron fanampiny Bridge Teknolojia ao anatin'ny ezaka mba hanatevin-daharana ny cryptocurrency sy ny blockchain firohotana - fa ny fikasana koa arbitrage maha samy hafa ny hasarobidin'ny Bitcoin, amin'izao fotoana izao sarobidy amin'ny US $ 11.188 isaky ny vola madinika, ary AECO mandatsa-dranomaso, amin'izao fotoana sarobidy amin'ny $1.98 toratelo isan-tongotra arivo amby iray alina.
Iron Bridge mikasa ny handoro mandatsa-dranomaso sy mamokatra herinaratra, ary mampiasa ny herinaratra eo amin'ny fitondrana solosaina fitaovana nomerika fitrandrahana vola.
Aoka hatao hoe 215 kilowatt ora ny herinaratra no ilaina mba hamokarana iray Bitcoin, Iron Bridge afaka mahazo vola US $ 49 isaky ny mcf noho ny entona.
Izany mihoatra noho ny 30 fotoana ny vidiny amin'izao fotoana izao Bridge Iron mandray noho ny entona, mihevitra ho manana ho amin'izao fotoana izao sy Bitcoin AECO vidiny.
"Raha ny miahiahy aho, mandatsa-dranomaso maina rehetra ao amin'ny orinasa mpamokatra dia tokony hahazo vaovao Lift ity, satria zana-kazo amin'ny tale handeha hanontany tena hoe nahoana orinasa tsy hitokana ny ampahany amin 'ny famokarana izany. "GMP FirstEnergy mpitari-draharaha lefitra sy ny mpiara-filoham-angovo varotra sy ny varotra Trent hoy Boehm.
LEDGER 30% OFF: ny https://www.le...
Previous Post:Chainalysis – ny orinasa izay nandrava ny anarana Bitcoin
Next Post:Ahoana no very Efa ho 200 Bitcoin varotra ity volana lasa